acid sulfuric barium hydrogen barium sulfate
(dd) (rnn) (kh) (kt)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2SO4 + Ba → H2 + BASO4
What is reaction condition of H2SO4 (sulfuric acid) reacts with Ba (barium) ?
How reactions can happened and produce H2 (hydrogen) and BaSO4 (barium sulfate) ?
Ba waxa uu ku falceliyaa H2SO4
Phenomenon after H2SO4 (sulfuric acid) reacts with Ba (barium)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2SO4 + Ba → H2 + BASO4
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee BaSO4 (barium)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaSO4 (barium sulfate) badeecad ahaan?
biyaha barium hydrogen barium hydroxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2H2O + Ba → H2 + Ba (OH)2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) ay kaga falceliyaan Ba ​​(barium)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2 (hydrogen) iyo Ba(OH)2 (barium hydroxide)?
Baaruumku wuxuu ku milmaa biyo
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan Ba ​​(barium)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2H2O + Ba → H2 + Ba (OH)2
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Ba(OH)2 (barium)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ba(OH)2 (barium hydroxide) badeecad ahaan?
Al2(NA4)3 + 4H2O + 5Ba → 4H2 + 3BaSO4 + 2Ba (AlO2)2
sulfate aluminium biyaha barium hydrogen barium sulfate
(rnn) (lng) (rnn) (kh) (kt) (rnn)
1 4 5 4 3 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Al2(NA4)3 + 4H2O + 5Ba → 4H2 + 3BaSO4 + 2Ba (AlO2)2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Al2 (SO4) 3 (aluminium sulfate) waxay la falgalaan H2O (biyaha) waxay la falgalaan Ba ​​(barium)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2 (hydrogen) iyo BaSO4 (barium sulfate) iyo Ba(AlO2)2 ()?
Haraaga barium wuxuu ku falceliyaa xalka sulphate aluminium
Dhacdada ka dib Al2 (SO4) 3 (aluminium sulfate) waxay la falgashaa H2O (biyaha) waxay la falgalaan Ba ​​(barium)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Al2(NA4)3 + 4H2O + 5Ba → 4H2 + 3BaSO4 + 2Ba (AlO2)2
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Ba(AlO2)2 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Ba(AlO2)2 (barium)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ba(AlO2) 2 () badeecad ahaan?